Global Voices teny Malagasy » Antoko politika 15 miara-manasonia fifanarahana momba ny zon’ny queer · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Jona 2021 4:48 GMT 1	 · Mpanoratra OC Media Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Zeorzia, Fahasalamàna, Fampandrosoana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Tsara, Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT), Zon'olombelona
Taratasy voasonia. Sary navoaka ao amin'ny pejy Facebook Tbilisi Pride .
Ny tantara etoana dia nivoaka voalohany  tao amin'ny tranonkalan'ny OC Media. Endrika maivamaivana kokoa no avoaka etoana araka ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Antoko politika miisa folo dimy amby (dimy ambin'ny folo) tao Zeorzia no nanao sonia fanambaràna iray manasongadina ny fanoloran-tenany avy hiaro ny zon'ny olona queer izany hoe nisafidy ny sady tsy ho lahy no tsy ho vavy.
Ny fifanarahana izay natsangan'ny Tbilisi Pride  dia nosoniavin'ny antoko politika lehibe avy amin'ny fanoherana ahitana ny United National Movement (UNM), European Georgia, Lelo, Antoko Repoblikana, Strategy Aghmashnabeli, ary ireo antoko Girchi roa tonta. Tsy nanasonia ny dosie kosa i Aleko Elisashvili ao amin'ny antokon'olompirenena, ny Antokon'ny Mpiasa, ary ireo olom-boafidin'ny Antoko Sosialista Eoropeana.
Tsy nanasonia ny fanambaràna ihany koa antoko mitondra Georgian Dream.
Nifanaraka ireo nanao sonia hampiasa “ny fomba rehetra eo ampelatanany hiady hamotika ny fanavakavahana sy ny herisetra ampiharina amin'ny olona sady tsy te-ho lahy no tsy te-ho vavy (queer people).”
Nivoady ihany koa ry zareo “hiaro ny fahafahan'ny olompirenena tsirairay mivory sy maneho hevitra ary tsy ijerena ny fironany ara-pananahana sy ny maha-lahy na maha-vavy azy ireo izany.”
Anaovan'ireo mpanohitra fihetsiketsehana mpandala ny mahazatra antsojay matetika manko ireo mpikatroka mpandala ny zon'ny queer te-haneho ny zony tao anatin'ny taona vitsivitsy izay. Tamin'ny taona 2019, tsy tonga tany amin'izay nokasaina hahatongavany ny diabem-pireharehana voalohany nataon'ny queer tao Zeorzia rehefa nanambara  ny minisiteran'ny atitany fa tsy hiaro azy ireo ny polisy.
Voalaza ao amin'ny fanambaràna ihany koa fa ny mpanao sonia dia “tsy hamela hisian'ny korontana eo amin'ny fiarahamonina sy ny kabarim-pankahalàna ao anatin'ny tontolo politika amin'ny fampiasana ny (fankahalàna pelaka) homophobia.”
Raha niresaka tamin'ny OC Media ny talen'ny Tbilisi Pride, Giorgi Tabagari, dia nilaza fa kihon-dalana eo amin'ny politika Zeorziana ny fanasoniavana ity taratasy ity.
“Sambany ny antoko politika no hita nanao dingana mankany amin'ny fiarovana ny zon'ny olona LGBT. Tsy manana hery ho lalàna ity dina ity fa saimbôlika, saingy dingana lehibe io,” hoy i Tabagari.
Nilaza i Tabagari fa efa nanatona ny antoko politika rehetra tao Zeorzia ny vondrona ary efa ho tapa-taona ny vondrona no nifandray tamin'ny Georgian Dream momba ity fanambaràna ity.
“Enim-bolana izahay no nifampiserasera tamin'ny mpitarika maro tao amin'ny antoko mitondra,” hoy ny nolazainy. “Indrisy fa tsy nanaiky ny hanasonia ny dosie ny solontenan'ny Georgian Dream, na dia tsy nitsipaka ankarihary aza,” hoy izy.
“Manantena izahay fa hiova hevitra ny Georgian Dream ary hanasonia ny taratasy,” hoy i Tabagari nanampy teny.
Nisy solontenan'ny Georgian Dream nanaiky haneho hevitra ny amin'izay antony tsy nanasoniavan'ny antoko ny dosie, fa avy eo ry zareo tsy nisy mety tratra antso.
Na dia namerina nanadihady matetika aza ny OC Media, dia mandà ny haneho hevitra amin'n antony tsy nanasoniavan'ny antoko ny dosie ny Georgian Dream.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/06/02/152746/
 pejy Facebook Tbilisi Pride: https://www.facebook.com/TiflisPride/photos/pcb.1126720977832087/1126709754499876
 nivoaka voalohany: https://oc-media.org/fifteen-georgian-parties-sign-joint-agreement-on-queer-rights/
 Tbilisi Pride: https://www.facebook.com/TiflisPride/posts/1126348261202692